Igravel yolwandle. Iimpawu, umsebenzi kunye neyona nto intle kwiNtengiso | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Izixhobo, Intlanzi
Xa silungiselela i-aquarium yethu kufuneka sazi ukuba kukho izinto ezinomsebenzi wobugcisa kunye nenye eyimfuneko ekusebenzeni kwayo. Nangona kunjalo, namhlanje siza kukubonisa into esebenza kokubini ukuhombisa kunye nokuba luncedo kule ndawo. Imalunga ne- igrabile yeelwandle. Igravel yenye yezinto ezisebenza zombini ekuhombiseni nakwibacteria ukuze ikhule kakuhle kwindalo. Ukongeza, le gravel iyanceda ukwenza lula ukucoca ezantsi kwe-aquarium.
Kule nqaku siza kukuxelela ukuba zeziphi iimpawu zegrabile ye-aquarium kwaye zeziphi ezona zilungileyo kwintengiso.
1 Olona luhlalu luhle lwee-aquariums
1.1 ICroci A4000100 Quartz emhlophe 1-3 mm
1.2 ICroci A4022203 Aquarium Gravel
1.3 Croci A4000132 UNowa Grey 4-8 mm
1.4 EMarina 12496 Gravel, Luhlaza
1.5 Igravel yokuhombisa elwandle kwi-Aquarium
2 Yintoni igrabile esetyenziselwa i-aquarium?
3 Iindidi zegrabile ye-aquarium
4 Uyikhetha njani igrabile esekwe kuhlobo lwe-aquarium
5 Yeyiphi engcono, isanti yolwandle okanye igrabile?
6 Bala inani legrabile efunekayo kwi-aquarium
7 Uhlamba njani igrabile ye-aquarium
Olona luhlalu luhle lwee-aquariums
iCroci Gravel ye... Bona amanqaku Jonga umnikelo
I-SSRIVER-Isicoci se ... Bona amanqaku Jonga umnikelo
I-Amtra Gravel ye... Bona amanqaku Jonga umnikelo
I-bdee 6 kwi-1 Cleanser ... Bona amanqaku Jonga umnikelo
Amtra Fine Quartz ye ... Bona amanqaku Jonga umnikelo
Okona kulungileyo	iCroci Gravel ye...
Umgangatho wexabiso	I-SSRIVER-Isicoci se ...
Oyintandokazi yethu	I-Amtra Gravel ye...
I-bdee 6 kwi-1 Cleanser ...
Amtra Fine Quartz ye ...
ICroci A4000100 Quartz emhlophe 1-3 mm
Croci A4000100 zwi ...
Luhlobo lwegrabile emhlophe yolwandle ithathwa njengobungakanani obuphakathi. Isebenza njengesiqendu sendalo ukulungelelanisa ii-aquariums ngendlela efana nendawo yemvelo kangangoko kunokwenzeka. Ayisiyongo kwaye ayizikhuphi iikhabhathi ngexesha lokusetyenziswa.
Ungacofa apha ukuthenga le gravel yolwandle.
ICroci A4022203 Aquarium Gravel
Croci A4022203 Gravel for ...
Le gravel ilungele ezo ndawo zasemanzini ezinjengezityalo zokwenyani. Ikhonza ukuhombisa i-aquarium kuba kukho iintlobo zonyango lwazo ngemibala. Iyona limestone ikakhulu kwaye ayinetyhefu kwaphela ngexesha lokusetyenziswa. Luhlobo oluthile lwenkozo enkulu kuba inobungakanani be-5 mm.
cofa apha ukufumana olu hlobo lwegrabile yolwandle.
Croci A4000132 UNowa Grey 4-8 mm
Croci A4000132 Grey Noa ...
Luhlobo lwegrabile emhlophe ye-aquarium esetyenziselwa ikakhulu ukuhombisa kunye nokunceda ukucoca ii-aquariums zendalo. Ayiyityhefu kwaye ayizikhuphi ii-carbonates ezisetyenziswayo. Ngokungafaniyo nale ikhankanywe apha ngasentla, inobungakanani oburhabaxa bokudla okuziinkozo
Pulsa apha ukuthenga le gravel yolwandle.
EMarina 12496 Gravel, Luhlaza
Olu hlobo lwegrabile lunamandla okwenza indawo enamanzi anembonakalo entle yokuhombisa. Le yeyona gravel yokuhombisa yeelwandle zasemanzini. I-substrate yagutyungelwa yi-epoxy resin eyenza ukuba igrabile ibe yinto engena emanzini. Ngale ndlela, iyanceda ukusebenza kakuhle kwe-aquarium. Ngokwenza inert, kuthintela naluphi na utshintsho lwamachiza emanzini.
Kukulungele ukuba babe nokuthintela ibacteria eluncedo ekukhuleni nasekuphuhlisweni kweentlanzi. Ukongeza, ibonelela ngokuhluza kwebhayiloji kunye namanzi asempilweni. cofa apha ukufumana olu hlobo lwegrabile.
Igravel yokuhombisa elwandle kwi-Aquarium
UMarina Gravilla ...
Le gravel ye-aquarium iza ngamanani ahlukeneyo. Inothuli kwaye ikhuselekile kwi-aquarium ukuze isebenze ngokufanelekileyo. Ayisiyongo xa isetyenziswa. Ngombulelo kulwakhiwo lwayo, inokunyusa ukolonisation yeebacteria eziluncedo zohlobo. Ukongeza, unokuxhamla ngokuba namanzi acocekileyo nasempilweni.
cofa apha ukufumana le gravel ye-aquarium.
Yintoni igrabile esetyenziselwa i-aquarium?
Igrabile ese-aquarium inemisebenzi eliqela enokunceda ukuba isebenze ngokufanelekileyo. Okokuqala, iyanceda ekuhombiseni. I-aquarium enamatye egrabile inemvakalelo yokuba yendalo ngakumbi kwaye iyinyani. Ngentlanzi kukwathetha imeko-bume efana kakhulu nendalo. Konke oku kwandisa ubuhle be-aquarium yethu.
Olunye usetyenziso lwegrabile kwi-aquarium kukuba nezityalo. Izityalo zendalo zifuna i-substrate ukuze ikwazi ukulungisa nokuphuhlisa. Okokugqibela, enkosi kubukho begrabile kwi-aquarium, kukho iibhaktheriya eziluncedo ekusebenzeni kakuhle kwamanzi kunye ne-aquarium ngokubanzi, esebenzisa le gravel ukukhula.
Iindidi zegrabile ye-aquarium
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zegrabile ezisetyenziswa kwiindawo ezinamanzi. Kukho i-quartz kunye nezo zingathathi hlangothi ezingenako ukutshintsha iiparameter zamanzi. Ungathenga neehashe ezinenkathalo ezonyusa i-GH kunye ne-KH yamanzi kwaye zilungele ukusetyenziswa nee-cichlids zaseAfrika. Ke, Ngale gravel inyusa ezi paramitha, kunokwenzeka ukunqanda ukuba kunyanzeleke ukuba ubonyuse ubulukhuni bamanzi.
Kukho imikrolo emnyama, emhlophe kunye nemibala. Kukho nezo zidityaniswe nge-epoxy. Ezinye zisetyenziselwa i-aquariums zamanzi amatsha kwaye ezinye zilungele ngakumbi ii-aquariums zaselwandle.
Uyikhetha njani igrabile esekwe kuhlobo lwe-aquarium
Kuya kufuneka sikhethe uhlobo lwegrabile oluvumela iibhaktheriya ukuba zihlale ngokuchanekileyo. Ukongeza, kufuneka ibeneempawu zokungaqhekeki kunye nokuhamba kwexesha ukunqanda ukungqubana kwamanzi. Enye into enomdla xa ukhetha igrabile kukuba inokugcina ubushushu ngokufanelekileyo. Nangona kunjalo, kwangaxeshanye, kufuneka ikwazi ukukhupha ubushushu ukuthintela ukunyuka kweqondo lobushushu elinokwenzakalisa iintlanzi.
Kuyimfuneko ukwazi ukuba i-aquarium yeyentlanzi yamanzi ashushu okanye abandayo. Ubunzulu betanki kufuneka buthathelwe ingqalelo, kuba ubukhulu bomthamo, kokukhona ubukhulu begrabile kufuneka buninzi. Iintlanzi zihlala zikhululekile ngakumbi ngegrabile evulekileyo yokungena kunye nezinye iintlobo zikhetha i-substrate exineneyo ngakumbi ukuze ihlale kuyo.
Yeyiphi engcono, isanti yolwandle okanye igrabile?
Ungomnye wemibuzo abantu abaqala kuyo kwilizwe le-aquariums abazibuze yona kakhulu. Isanti yesilica icolile kwaye isetyenziselwa ukuhombisa. Kufuneka ithathelwe ingqalelo ukuba isanti inobungakanani bengqolowa obungaphantsi kwe-1 mm. Igravel ithathwa njengobungakanani beenkozo phakathi kwe-2 kunye ne-5 mm. Igrabile efanelekileyo yee-aquariums zihlala zijiyile ngobukhulu. Nangona kunjalo, kufuneka sivavanye ukuba loluphi uhlobo lwe-aquarium esiza kuyihombisa.
Isanti iyahombisa ngakumbi kunamatye kodwa inokubumbana kakhulu. Ukuba sifuna ukuba ne-aquarium enezityalo zokwenyani, kungcono ukusebenzisa igrabile ukuze izityalo zikhule ngcono. Isanti ilunge ngakumbi ukuba sifuna ukuphucula ubuhle.
Bala inani legrabile efunekayo kwi-aquarium
Indlela elula yokubala ukuba ingakanani igrabile oyifunayo kwi-aquarium yakho yile ilandelayo. Phindaphinda ubude ngobubanzi be-aquarium kunye nenani leesentimitha elingqingqwa ofuna ukuba nalo. Ndiza kuphila elo Xabiso ngaphakathi kwe-1000. Onke amaxabiso asetyenziswe kule fomyula kufuneka abesentimitha. Oku kuya kukunika ixabiso eliphambili kwiilitha.
Uhlamba njani igrabile ye-aquarium
Ukuhlamba igrabile evela kwi-aquarium kufuneka uyibeke kwisisefo esikhulu nesicocekileyo ugalele amanzi phezu kwaso. Emva koko siyaphazamiseka ngobunono kwaye sihlambe igrabile phezu kwebhakethi endaweni yedreyini ukuze ityibilike. Ihlala ifuna ukuhlanjwa okuninzi.
Ndiyathemba ukuba ngolwazi olunje ungafunda ngakumbi ngegrabile ye-aquarium.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » Igrabile ye-Aquarium
Iifilitha zangaphandle ze-aquarium